PRADEEP BASHYAL: माइकलका आँखामा नेपाली साहित्य
माइकलका आँखामा नेपाली साहित्य
युनिभर्सिटी अफ लन्डनमा नेपाली र हिमालयन स्टडिजका प्राध्यापक हुन्, माइकल हट। सोही विश्वविद्यालयको साउथ एसियन स्टडिजतर्फको स्नातक विद्यार्थीका रूपमा साढे तीन दशकअघि उनी हिन्दी पढ्न भारतको वृन्दावन आएका थिए। त्यहाँ वैष्णव अभिलेखको संकलन र संवर्द्धनका निम्ति स्थापना गरएिको एक अध्ययन संस्थान थियो । त्यसका निम्ति नेपाली कागज लिन उनका साथी र उनी नेपाल आएका थिए। साथी दिल्लीबाट हवाईजहाजमा सीधै काठमाडौँ छिरे भने माइकल हटले रक्सौल हुँदै सडकको बाटो रोजे। २० वर्षे बेलायती ठिटोलाई नेपालले यति मोहित पारेछ कि उनले योजनाभन्दा थप दुई साता यतै बिताए, काठमाडौँ र पोखरा घुमे। त्यही प्रभावले लन्डन फर्केपछि उनले नेपाली भाषाका थप दुई विषय आफ्नो ऐच्छिक अध्ययनमा थपे।
त्यसयता हो, उनको दिमागमा कवीर, सुरदास, तुलसीदाससँगै गुरुप्रसाद मैनालीका कथा, सिद्धिचरण श्रेष्ठ र लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका कविता घुम्न थालेको। त्यसरी नेपाली साहित्यसँग गाँसिएको वर्षौं लामो सामीप्यको एउटा ऐतिहासिक प्रतिविम्ब हो, उनको निबन्धसंग्रह इलक्वेन्ट हिल्स, एसेज अन नेपाली लिटरेचर। यसमा सन् १९८९ देखि २००७ भित्र लेखिएका नौ निबन्ध छन्। आधुनिक नेपाली समाज र साहित्यबारे पुस्तकमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको मुनामदन, बीपी कोइरालाको सुम्निमा, पारजिातको शिरीषको फूल र भूपी शेरचनको घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छेको रचनाको पृष्ठभूमिको सूक्ष्म विश्लेषण छ। मुग्लान जाने, लाहुरे बन्ने एक समय चल्तीको नेपाली शैलीले साहित्यको रूप कसरी धारण गर्दै गयो भन्ने अर्को रोचक पक्ष समेटिएको छ।
विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलन कसरी साहित्यसँग जोडिए, सांगि्रला वा आदर्श नेपालका भावना कसरी साहित्यका स्रोत बने भन्ने पक्षलाई विश्लेषण गरेर पुस्तकलाई ऐतिहासिक दस्तावेजजस्तो बनाइएको छ। त्यससँगै विभिन्न समय र वादको प्रतिनिधित्व गर्ने साहित्यकारका व्यक्तिगत पक्षसमेत जोडिन आइपुग्छन्। यसरी उनका निबन्धहरूले साहित्य सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, राजनीतिक पक्षसँग कसरी जोडिएको हुन्छ भन्ने सुन्दर चित्र देखाउँछन्।
प्राध्यापक हट नेपाली भाषाका साधारण हिमायती मात्र होइनन्, उनले नेपाली भाषामै आफ्नो विद्यावारििधसमेत गरेका छन्। थुप्रै नेपाली साहित्यकारसँग लामो उठबससमेत छ उनको। दूरदराजको देशमा पुगेर त्यहाँको साहित्य केलाउन एउटा विदेशीलाई पक्कै सहज थिएन, जसका लागि उनको मिहिनेत प्रशंसनीय छ।
नेपाली आधुनिक साहित्यको सुरुआतमा लाहुर र मुग्लानका प्रसंग खुबै चले। गोर्खा त्यसमा जोडिने भइहाल्यो। बेलायती सैन्य लेखन र सञ्चारमाध्यममा गोर्खा तारन्तार महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा प्रस्तुत भइरहँदासमेत नेपालमा भने साहित्यमा त्यसलाई जटिल रूपमा उठान गरएिको हटले लेखेका छन्। गोर्खाबारे लेखिएको पहिलो साहित्य रतनसिंह गुरुङको आउटपोस्टको कथा, सिपाही (कथा), पारिजातको शिरीषको फूलको केन्द्रीय पात्र सुयोगवीरसमेत पूर्वगोर्खा सैनिक हुन्। लाहुरेलाई कतै रोमाञ्चकारी पात्रका रूपमा, कतै परिवारप्रति गैरजिम्मेवार (शेरचन), सामाजिक रूपमा कमजोर (कोइराला), कतै कमजोर नागरकिसँग शक्तिको आडमा जीवन र मृत्युको खेल खेल्दा नैतिक पतनको सम्भावना
(पारिजात) हुनेजसरी प्रस्तुत गरिएको छ। मुग्लान जाने प्रसंगमै लीलबहादुर क्षेत्रीको बसाइँ उपन्यासले चल्तीको सामाजिक यथार्थतावादबाट समाजवादी यथार्थवाद समातेको हटले लेखेका छन्। एउटा समय अंग्रेजी कमजोर भएको अवस्थामा नेपाली साहित्यको पश्चिमा साहित्यसँग सम्बन्ध हिन्दी र बंगाली अनुवादमार्फत हुन्थ्यो। नेपालभित्रै पनि शारदा पत्रिकामा आफ्ना रचना छपाउनेकै साहित्यमा ठूलो दबदबा थियो।
मुनामदनजस्तो सर्वाधिक रुचाइएको कृतिबारे उनको एउटा पूरै निबन्ध छ। पटनामा पढ्दाखेर उनले एक जना नेवार साथीलाई मातृ भाषामा कुनै गीतिकाव्य भए सुनाउन भनेका थिए रे! आफ्नी आमाको आग्रहमा व्यापारका लागि ल्हासा जाने एक पात्रको कथा सुनाए उनले। नेवारी लोकगीत पनि सुनाए, 'जिगु ब्याहा जूगु लछी मदुनी' (मेरो विवाह भएको एक महिना भएको छैन)। मुनामदनको स्रोत त्यही भएको हटको दाबी छ।
बीपी कोइरालाको उपन्यास सुम्निमालाई हेर्ने क्रममा मानिसको वास्तविक परचिय र उसले देखाउने परचियभित्र भौतिकवाद र अध्यात्मवाद, परचिय र उच्च अहमताबीचको द्वन्द्व मुख्य रूपमा उठाइएको छ भने आर्य र अनार्य समुदायबीचको द्वन्द्वको कथा पनि भनेका छन् हटले। आदर्श नेपालको भावनालाई साहित्यमा समेट्ने क्रममा रचनाका दृष्टिले हेरएिको छ। जस्तो : परम्परागत रूपमा हेर्दा 'के नेपाल सानो छ?', आदर्शवादी दृष्टिकोणबाट हेर्दा 'पहाडी जीवन' वा विद्रोही भावबाट हेर्दा 'साँढे', 'बाघले किन बच्चा खान्छ' जस्ता शैली छन्।
पुस्तकमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रभाव, दार्जीलिङको तेस्रो आयाम साहित्यिक अभियान, अस्वीकृत जमात, बुट पालिस आन्दोलन, सडक कविता क्रान्ति, प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका लागि वसन्तको खोजी र पग्लेर पनि तिम्रो मुटुबाट कविता संग्रहको समेत चर्चा छ।
नौ निबन्धमध्ये आठवटा विभिन्न जर्नलमा प्रकाशित भइसकेका हुन्। जर्नल लेखन भएकाले पनि त्यसमा प्राविधिक रूपमा कमजोरी भेट्न गाह्रो छ। पुस्तक साहित्य अनुरागी सबैलाई रुचिकर हुन सक्छ। सरल अंग्रेजीले पुस्तकलाई पठनीय बनाएको छ।
इलक्वेन्ट हिल्स, एसेज अन नेपाली लिटरेचर
लेखक : माइकल हट
पृष्ठ : १९३
मूल्य : ५०० रुपियाँ
written by Admin at 5:34 PM